မြေထဲပင်လယ်ကမ်းခြေရှိ အေသင်မြို့ဟောင်းဆီ ခရီးသွားခြင်း (၂) ~ Htet Aung Kyaw
မြေထဲပင်လယ်ကမ်းခြေရှိ အေသင်မြို့ဟောင်းဆီ ခရီးသွားခြင်း (၂)
2:27 AM Htet Aung Kyaw No comments
The Voice Daily, 19-03-2017. (ယူနီကုဒ်ကုို အောက်ဆုံးမှာ ဖတ်နုိုင်ပါတယ်)
မနက်အိပ်ရာနုိုးချိန် ရာသီဥတုအနေအထားကို Check လုိုက်တော့ နေသာပြီး အပူချိန်က ၁၈ ဒီဂရီတောင် ရှိနေပါတယ်။ ရေခဲပြင်ကနေ ထွက်ပြေးလာသူတဦးအဖုို့ Wow! ဆုိုပြီး အော်ချင်စရာကြိး။ ဥရောပနုိုင်ငံချင်း တူရဲ့နဲ့ ဘာကြောင့် ဒီလောက်ကွာသွားတာလဲ။ အင်း- မြန်မာပြည်မှာတောင် ပူတာအုိုနဲ့ ကော့သောင်က ဒီလုိုကွာနေတာပဲလေ။ မြောက်ဝင်းရုိုးစွန်းနဲ့နီးတဲ့ အော်စလုိုနဲ့ မြေထဲပင်လယ်ကမ်ခြေဘေးက အေသင်ဟာ ဒီလောက်တော့ကွာမှာပေါ့။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ် ဆောင်းတွင်းကာလတွေတုန်းကရောက်ခဲ့ဖူးတဲ့ စပိန်နဲ့ ပေါ်တူဂီ ထက်တောင် ဂရိရာသီဥတုက ပုိုနွေးနေပါသေးတယ်။
ဘယ်နေရာတွေသွားလည်ရင်ကောင်းမလဲဆုိုပြီး ဟုိုတယ်ကောင်တာမှာအကြံတောင်းတော့ Tourist Bus လုို့ခေါ်တဲ့ သင်္ကြန်ကားလုို အမုိုးဖွင့် ၂ ထပ်ကားကိုစီးပြီးလျောက်လည်တာ အကောင်းဆုံးလုို့ဆုိုပါတယ်။ သူငယ်ချင်း တယောက်ကတော့ ပြောဖူးပါတယ်။ တုိုးရစ်ကားစီးပြီးလျောက်လည်သူတွေဟာ Plan မရှိသူ၊ ဘယ်နေရာကုိုသွားမယ်ဆုိုပြီး ကြိုတင်အစီစဉ်မဆွဲထားနုိုင်သူတွေတဲ့။ သူဝေဖန်ရင်လည်း ခံရမှာပါပဲ။ အေသင်ရောက်ရင် ဘာလုပ်မယ်ဆုိုပြီး အသေးစိပ်အစီစဉ်ဆွဲထားတာ မရှိပါ။
နော်ဝေးမှာ အေးလွန်းလုို့ ဆောင်းကုိုရှောင်ချင်တာရယ်၊ ပြီးတော့ သမ္မတအုိုဘားမား ရာထူးကမဆင်းခင် ၂၀၁၆ နုိုဝင်ဘာမှာ ဥရောပနောက်ဆုံးခရီးအဖြစ် အေသင်ကိုလာလည်တာ။ BC ၅ ရာစုကတည်းကရှိခဲ့တဲ့ ပါသီနွန် (Parthenon) ဘုရားကျောင်းဆီသွားပြီး ဒီမုိုကရေစီသဘောတရားအကြောင်းပြောသွားတာကို အမှတ်ရနေပါတယ်။ တခါ အထက်တန်းကျောင်းသားဘ၀တုန်းက သမုိုင်းထဲမှာသင်ဖူးတဲ့ ယုံကြည်ချက် အတွက် အဆိပ်သောက်သေသွားသူ ဆုိုခရေတီးကို အမှတ်ရနေပါတယ်။ ဒီတော့ အေသင်ရောက်ရင် အဲဒီနေရာ ၂ ခုဆီတော့ ရောက်အောင်သွားမယ်၊ ရာသီဥတုက သိပ်နွေးမယ်ဆုိုရင်တော့ ကမ်းခြေသွားပြီး ရေကူးမယ်ပေါ့။ ဒီထက် ပုိုတဲ့အစီစဉ်မရှိပါဘူး။
အဲဒါဆုိုရင် တုိုးရစ်ကားစီးပြီးလည်တာ အကောင်းဆုံးပဲတဲ့။ ကားခကလည်းဈေးပေါသလားမမေးနဲ့။ ၁၆ ယူရုိုဖုိုး ၀ယ်ထားရင် ၄၈ နာရီစာ စီးလုို့ရတယ်တဲ့။ အရင် စပိန်၊ ပေါ်တူဂီ၊ နယ်သာလန်၊ ဘလဂျီယံမှာ ၂၂ ယူရုိုပေးရတာတောင် ၂၄ နာရီပဲစီးခွင့်ရှိပါတယ်။ ၁၆ ယူရုိုဆုိုတာ ကားပေါ်မှာ ၀ယ်တဲ့ဈေး။ ဟုိုတယ်မှာ ၀ယ်ရင် ၁၃ ယူရုိုနဲ့ ပရုိုမုိုးရှင်းပေးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကုိုယ်တည်းတဲ့ဟုိုတယ်က ဈေးနဲနဲပေါတဲ့ နေရာဆုိုတော့ တုိုးရစ်ကားမှတ်တုိုင် မရှိပါ။ ၁၀ မီနစ်လောက် လမ်းလျောက်ရတဲ့ အမျိုးသားပြတုိုက်ဆီ အရင်သွားပြီး အဲဒီမှတ်တုိုင်မှာ ကားစီးပါလုို့ သူကအကြံပေးပါတယ်။
သာယာလုိုက်တဲ့ရာသီဥတု။ တဆောင်းလုံးသိမ်းထားရတဲ့ နေကာမျက်မှန်လည်း အေသင်ရောက်မှပဲ တပ်ခွင့်ရပါတော့တယ်။ ဟုိုတယ်ရှေ့မှာ ပထမဆုံးတွေ့မိတဲ့အပင်က အော်စလုိုမှာဘယ်လုိုမှမြင်ခွင့်မရနုိုင်တဲ့ ဆီအုန်းပင်တွေ၊ တောထန်းပင်တွေ။ လမ်းကြားတခုကိုကျော်တော့ လိမ်မော်သီးတွေအပြည့်နဲ့လှပနေတဲ့ လမ်းဘေးသစ်ပင်တွေ။ နောက်ထပ်တွေ့တဲ့အဆောက်ဦတခုရှေ့မှာတော့ ဆီအုန်းအပြင် ယူကလစ်ပင်ကြီး တွေကိုပါတွေ့ရပါတယ်။ ရေခဲပြင် အရပ် ထင်းရူးတောထဲက ထွက်လာသူတဦးအဖုို့ အထူးအဆန်းမြင် ကွင်းတွေပါပဲ။
နောက်ထပ်သတိထားမိတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်အနေအထားက လမ်းစည်းကမ်းနဲ့ လူစည်းကမ်းက အနောက် ဥရောပလုိုမဟုတ်။ ပလက်ဖောင်းပေါ် ကုိုယ်တချမ်းတင်ပြီး ရပ်ထားတဲ့ကားတွေ မနဲဘူး။ လမ်းအကွ့တွေ၊ လူကူးလမ်းတွေပေါ် ရပ်ထားတဲ့ကားတွေကုိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။ ပြီးတော့ ဆုိုင်ကယ်တွေက လည်းပေါ သလားမမေးနဲ့။ ချင်းမုိုင်တုို့၊ မန္တလေးတုို့နဲ့တူတယ်ပြောရမယ်ထင်ပါတယ်။ ဆိုင်ကယ်ဦးထုတ်မဆောင်း သူလဲ အများကြီးပါပဲ စက်ဘီးသမားတချို့ကုို တွေ့ရပေမဲ့ ဒီမြို့မှာ စက်ဘီးလမ်းမရှိပါဘူး။ (အနောက်ဥရောပ နုိုင်ငံအားလုံးနီးပါးမှာ စက်ဘီးလမ်းတွေ အသေချာလုပ်ပေးထားတာတွေ့ရပါတယ်)။
ဟုိုငေးဒီငေးနဲ့ ၁၀ မီနစ်ခန့်အကြာမှာတော့ အမျိုးသားပြတုိုက်ရှေ့ရောက်လာပါတယ်။ ပြတုိုက်ရှေ့မှာတွေ့ရ တဲ့ ဆီအုန်းပင်၊ ပေပင်၊ လိမ်မော်ပင်တွေနဲ့ ငှက်ကလေးတွေကို ဓတ်ပုံရုိုက်ဖို့၊ တိမ်ကင်းပြီး တောက်ပနေတဲ့ နေရောင်ချည်အောက်မှာ အနွေးထည်ချွတ်ပြီး ထုိုင်ဖုို့အရေးသာ အားသန်နေတဲ့အတွက် ပြတုိုက်ထဲ မ၀င်ဖြစ်လုိုက်ပါဘူး။
(Parthenon) ပါသီနွန် ကျောင်းတော် ဆီသုို့
လာပါပြီ ဟောဒီမှာ Tourist ကားတွေ။ မီနစ် ၃၀ တစီးရှိပြီး အနီ၊ အ၀ါ၊ အပြာ ၃ လုိုင်းရှိပါတယ်။ တခြား ဥရောပနုိုင်ငံတွေမှာ ဘယ်ကားဖြစ်ဖြစ် တက်စီးလုို့ရပေမဲ့ ဒီမှာတော့ မရဘူး။ ကုိုယ်ဝယ်မိတဲ့လက်မှတ်က အပြာလုိုင်းတခုပဲ စီးခွင့်ရှိသတဲ့။ အမျိုးသားပြတုိုက်ရှေ့ကနေ မြို့လယ်ဆီရောက်လာပါတယ်။ တခြား ဥရောပနုိုင်ငံတွေလုိုပဲ မြေအောက်ရထားဘူတာတွေ၊ ပန်းခြံတွေ၊ ဈေးဝယ်စင်တာတွေရှေ့မှာ လူတွေစည် ကားနေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ထူးခြားတာက ဒီမှာတွေ့မိတဲ့လူတွေဟာ အနောက်ဥရောပမှာလုို လူဖြူ၊ လူမဲ၊ လူဝါတွေသိပ်မများပဲ မနေ့က အင်စတန်ဘူးလ် လေယဉ်ကွင်းမှာတွေ့မိသလို ဥရောပနဲ့ အာဖရိကားကြားက အရောင်တွေအတော်များနေတာ သတိထားမိပါတယ်။
လမ်းဘေး ကော်ဖီဆုိုင်တွေမှာထုိုင်နေတဲ့ ပင်စားအရွယ်အတော်များများကိုတွေ့ရသလုို အထုပ်အပုိုး ကိ်ုယ်စီနဲ့ ပန်းခြံ ထဲထုိုင်နေတဲ့ လူငယ်၊ လူရွယ်အတော်များများကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ ကြည့်ရတာ ဆုိုင်မှာထုိုင်နေသူတွေက ဒေသခံဂရိတွေဖြစ်ပုံရပြီး ပန်းခြံထဲက အထုပ်အပုိုးနဲ့လူငယ်တွေကတော့ အာဖရိကဖက်ကနေ လှေစီးပြေးဝင်လာသူတွေ ဖြစ်ပုံရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သေချာအောင် မေးမြန်းခွင့် မရခဲ့ပါဘူး။ Tourist ကားပေါ်ရှိ စပီကာကလည်း အဲဒီလူတွေ အကြောင်းရှင်းပြတာမဟုတ်။ လမ်း တလျောက်တွေ့ရတဲ့ အထင်ကရ ရှေးဟောင်းအဆောက်ဦတွေအကြောင်းပဲ ရှင်းပြနေတာပါ။
အေသင်ဟာ ရှေးဟောင်းမြို့တော်ဆုိုတဲ့အတုိုင်း အိမ်အုိုဟောင်း အတော်များများကို မြို့ထဲမှာတွေ့ရပါတယ်။ ၄-၅ မှတ်တုိုင်စီးပြီးတဲ့အခါမှာတော့ တောင်ကုန်းပေါ်က ပါသီနွန်ကျောင်းတော်ကုိုလှမ်းမြင်ရပါတယ်။ တကယ်က အဲဒီကျောင်းတောင်ဟာ မြို့လယ်တောင်ကုန်းပေါ်မှာရှိနေလုို့ တမြို့လုံးကနေ လှမ်းမြင်နုိုင်တဲ့ သဘောပါ။ ပါလီမန်ရင်ပြင် ဆီမရောက်ခင် တမှတ်တုိုင်အလုိုမှာတော့ သား-ငါးဈေးတန်းကြီး တခုကုိုတွေ့ရပါတယ်။ ဥရောပနဲ့မတူပဲ အာရှဒေသဖက်က ဈေးတွေနဲ့ ပုိုတူနေသလုိုပါပဲ။
အေသင်ပါလီမန်ကိုအခုမှ လူကုိုယ်တုိုင်မြင်ဖူးပေမဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပုိုင်း ဂရိရဲ့စီးပွားရေးအကျပ်အတည်း ကာလက ဒီပါလီမန်ရှေ့မှာ ဆန္ဒပြနေကြတာကို TV မှာအကြိမ်အတော်များများမြင်ဖူးပြီးသားပါ။ ပါလီမန်ဘေးက ပန်းခြံကြီးကလည်းနဲတာမဟုတ်။ အဲဒီပန်းခြံထဲက တောထန်းပင်တန်းဟာ အတော်လှ ပါနေပါတယ်။ ပန်းခြံအလွန်မှာ Temple of Zeus ကျောင်းတော်ဟောင်းနေရာကိုတွေ့ပေမဲ့ မဆင်းဖြစ်ခဲ့ပါ။ ဒီနေ့အတွက် ပထမ ဦးစားပေးက ပါသီနွန်ကျောင်းတော်ဖြစ်နေတယ်မဟုတ်ပါလား။
နောက်တမှတ်တုိုင်အကျော်မှာတော့ ကားက တောင်ပေါ်စတက်ပါတယ်။ နေ့လည် ၁၂ နာရီခွဲဆုိုတော့ ဓတ်ပုံရုိုက်ဖုို့ ဘယ်လုိုမှမကောင်းနုိုင်။ ဒါပေမဲ့ အချိန်ရွေးနေလုို့မရ။ ကားပေါ်ပါလာသူ အားလုံးဆင်းကြည့် တဲ့နေရာဖြစ်ပြီး အေသင်မှာတွေ့ရသမျှနေရာတွေထဲ အစည်းကားဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ၀င်ကြေးကလည်း အများဆုံးနေရာဖြစ်ပြီး ယူရွန် ၁၀ ပေးရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တန်ပါတယ်။ BC ၅ ရာစု (ခရစ်မပေါ်မီ နှစ် ၅၀၀) က သမုိုင်းဝင်အဆောက်ဦတခုကို ကြည့်ခွင့်ရဖုို့ဆုိုတာ လွယ်တာမဟုတ်။ မြန်မာနုိုင်ငံက ပုဂံဘုရားတွေ ထက် နှစ် ၁၀၀၀ နီးပါး ပုိုရှေးကျတဲ့နေရာပေါ့။
၀င်ဝမှာ စတွေ့တဲ့အဆောက်ဦအမည်က Odeon of Herodes Atticus တဲ့။ ကျောက်တုံးတွေနဲ့ဆောက် ထားတဲ့ လူထောင်နဲ့ချီကြည့်နုိုင်တဲ့ သမုိုင်းထဲက ရှေးဟောင်းပွဲကြည့်စင်ကြီးဆုိုပါစုို့။ အဲဒီကနေ အပေါ်ကုို ဆက်တက်တော့ ဧရာမကျောက်လုံးတုိုင်ကြီးတွေကိုတွေ့ရပါတယ်။ အဝေးကကြည့်ရင် ကွန်ကရစ်လောင်း ထားတဲ့ ကျောက်တုိုင်ကြီးလုို့ထင်ရပေမဲ့ အနီးကပ်အသေချာကြည့်တော့ ကွန်ကရစ်မဟုတ်ပါ။ ၃ ပေစီ လောက် အပုိုင်းလုိုက်ဖြတ်တောက်ထားတဲ့ ကျောက်တုံးကြီးတွေကို တခုစီထပ်ပြီးလုပ်ထားတဲ့ ကျောက် တုိုင်ကြီးတွေပါ။
အဲဒီတုိုင်တွေပေါ်က မပြိုကျသေးပဲကျန်နေတဲ့ ကျောက်တုံးအမုိုးအပုိုင်းအစကတော့ Propylaea ဘုရား ကျောင်းရဲ့ ခေါင်းမုိုးပေါ့။ အဲဒီဝင်ပေါက်အလွန်မှာတော့ ဒီတောင်ကုန်းရဲ့ အဓိကအဆောက်ဦ ပါသီနွန် (Parthenon) ကျောင်း တော်ကြီးကိုတွေ့ရပါတယ်။ ကျောင်းဆုိုတာ temple ကုို အလွယ်ခေါ်လုိုက်တာပါ။ တတယ်က goddess Athena နတ်မိမယ်နေရာလို့ဆုိုပါတယ်။ 447 BC မှာကတည်းက ဒီကျောင်းကုို စဆောက်တာဆုိုတော့ လူ့သမုိုင်းမှာ ကုိုးကွယ်ယုံကြည်မှုစတင်ပေါ်ကာစ (ဘုရားတွေမပေါ်ခင်) အချိ်န်ပဲရှိ ပါသေးတယ်။ ဒီကျောင်းမှာနေတဲ့ နတ်ဘုရားက သူတုို့ကုို ကူညီစောင်မတယ်လုို့ အေသင်မြို့သားတွေက ယုံကြည်ကြတယ်လို့ဆုိုပါတယ်။
ဒါတွေက လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၂၅၀၀ ကျော်က ရာဇ၀င်ပါ။ အခုတော့ ဒီသမုိုင်းဝင်အဆောက်ဦကုို မူလ လက်ရာ အတုိုင်းပြန်လည်ထိမ်းသိမ်းထားနုိုင်အောင် EU အကူအညီနဲ့ပြုပြင်နေတယ်လုို့ စာတန်းရေးထား တာတွေ့ရပါတယ်။ ပြင်ဆင်မှုလုပ်နေတဲ့ ယန္တယားတွေလည်းလုပ်ငန်းခွင်ထဲရှိနေပါတယ်။ ရှေးဟောင်း ကျောက်တုိုင်တွေ ထုိုးထုိုးထောင်ထောင်ဖြစ်နေတဲ့ အဲဒီအဆောက်ဦဘေးမှာတော့ နတ်သမီးရုပ် ၅ ခု ကထမ်းထားတဲ့ အဆောက်ဦ၊ ဂရိနုိုင်ငံတော် အလံတလူလူလွှင့်နေတဲ့တောင်ကုန်းနဲ့ ဟုိုခတ်လှမ်းလှမ်းက Mount Lycabettus ကုို မြင်နေရပါတယ်။
သမ္မတ အုိုဘားမားလာတုန်းက တကူးတကာ့အချိန်ပေး လေ့လာခဲ့တဲ့နေရာပေါ့။ ရှေးဟောင်းဂရိယဉ် ကျေးမှု၊ ဒီမုိုက ရေစီအတွေးအခေါ်နဲ့ အနောက်တုိုင်းလူအဖွဲ့အစည်း western civilization အတွက် သိပ်အရေးကြီးတဲ့နေရာတခု ဖြစ်တယ်လို့ဆုိုပါတယ်။ ဒီတောင်ကုန်းဟာ အေသင်မြို့လယ်ခေါင်တည့်တည့် မှာရှိနေတာကြောင့် တမြို့လုံးကိုလှမ်း ကြည့်ခွင့်ရတဲ့မြင်ကွင်းကလဲ လှပနေပါတယ်။ အေသင်မှာ လူဦးရေ ၇ သိန်းနီးပါးရှိပြီး ဂရိတနုိုင်ငံလုံးလူဦးရေက ၁၂ သန်းနီးပါးရှိပါတယ်။
သမုိုင်းဝင်အဆောက်ဦတွေကိုငေးရင်း၊ ဓတ်ပုံရုိုက်ရင်းနဲ့ အချိန်တွေ ဘယ်လုိုကုန်သွားမှန်းမသိလုိုက်။ ဘတ်စ်ကားဂိတ်ပြန်ရောက်တော့ နေ့လည် ၂ နာရီကျော်နေပြီ။ အပြာရောင်ကားက ကမ်းနားဖက်သွား တာတစီး၊ မြို့ထဲပြန်ဝင် တာတစီးရှိတယ်လို့ ကားဂိတ်မှာစောင့်နေတဲ့ ဧည့်လမ်းညွှန်ကောင်မလေး ကပြောပါတယ်။ ကောင်မလေးဆုိုလုို့ ဥရောပသူအတော်များများ ဆေးလိပ်သောက်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ထူးခြားတာက အနောက်ဥရောပသူတွေက စီးကရက်သောက်ပြီး အေသင်သူတွေက ပွတ်ချွန်း (လက်လုပ် ဆေးလိပ်) သောက်နေခြင်းပါ။ စားသောက်ဆုိုင်တွေမှာလည်း ဆေးလိပ်သောက်သူတွေရှိနေဆဲမုို့ နော်ဝေမှာလုို ဆေးလိပ်ဥပဒေ သိပ်တင်းကျပ်ပုံမရသေးပါ။
နေသာတုန်း ကမ်းနားဖက်အရင်သွားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လုိုက်ပါတယ်။ လှလုိုက်တဲ့ကမ်းခြေတွေ၊ အပူချိန်က ၂၀ တောင်ကျော်မလားမသိပါ။ ကမ်းခြေမှာ ရေကူးသူ၊ နေစာလှူံသူ၊ လမ်းလျောက်နေသူ၊ ဘာဘီကျုးကင် နေသူတွေအများကြီး။ ရေမကူးရင်တောင် သဲသောင်ပေါ် လမ်းတော့ဆင်းလျောက်ကြည့်ဦးမှဆုိုပြီး ကားပေါ်က ဆင်းလုိုက်ပါတယ်။ ပလက်ဖောင်းပေါ်ရောက်ပြီးမှ နောက်ဘတ်စ်ကားက ဘယ်ချိန်လဲဆိုပြီးမေး မိပါတယ်။ လမ်းဘေးဆုိုင်မှာ ဆေးလိပ်ဝယ်ပြီးပြန်လာတဲ့ ကားဆရာက ဒီကားဟာ နောက်ဆုံးပဲတဲ့။ အမ်- အဲဒါနဲ့ ကမ်းခြေပေါ် လမ်းလျောက်ခွင့်မရပဲ ကားပေါ်ပြန်တက်ခဲ့ရတယ်ဆုိုပါတော့။
ကမ်းခြေတလျောက် ကားမောင်းချိန် တနာရီနီးပါးကြာတယ်ဆုိုတော့ အသွားအပြန် ၂ နာရီတောင်။ ဟုိုတယ်ပြန်ရောက်တော့ ညနေ ၅ နာရီလောက်ရှိနေပြီ။ အေးရှားဆုိုင်ကုိုရှာမတွေ့သေးတော့ အီတလီ ပီဇာနဲ့ပဲ ညစာကုို ဗုိုက်ဖြည့်လုိုက်ရပါတယ်။ နောက်တနေ့မနက်မှာတော့ မနေ့ကမရောက်ဖြစ်သေးတဲ့ ဆိုခရေးတီး ပြတုိုက်ဆီရောက် အောင်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်လုိုက်ပါတယ်။ ထုံးစံအတုိုင်း Tourist ကားကို မနေ့ကအတုိုင်းပြန်စီး။ မြို့တပတ်ပတ်ပြီးမှ ဆိုခရေတီးနဲ့ပလေတုိုတုို့ ရုပ်တုတွေရှိတဲ့ အမျိုးသားစာကြည့် တုိုက်ဆီရောက်ပါတယ်။
ပါသီနွန်ကျောင်းတော်၊ Zeus ကျောင်းတော်နဲ့ တခြားပြတုိုက်တွေမှာ လူများသလောက် ဆုိုခရေးတီးတုို့ ဆီမှာ လူနဲပါတယ်။ ခရစ်မပေါ်ခင်ကတည်းက ဒီမုိုကရေစီသဘောတရားအခြေခံတွေကိုငြင်းခုန်ခဲ့ဖူးတဲ့ ကျောင်းတော်ဟောင်းကြီးရဲ့ဝင်ပေါက်မှာ ကျောက်ရုပ် ၂ ခုကိုတွေ့ရပါတယ်။ ဂရိဘာသာနဲ့ရေးထား တာဆုိုတော့ ဘာတွေမှန်းမသိ။ ဒါလည်း ဂရိရဲ့ထူးခြားချက်ပါပဲ။ အနောက်ဥရောပနုိုင်ငံအတော်များများမှာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ဆုိုင်းဘုတ်တွေရေးထားသလုို လူတုိုင်းနီးပါး အင်္ဂလိပ်စကားပြောတတ်ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဂရိမှာ အင်္ဂလိပ်စကားပြောနုိုင်သူနဲနေဆဲဖြစ်ပြီး ဆုိုင်းဘုတ်တွေကလည်း ဂရိဘာသာတခု တည်းနဲ့ရေးထားတာက များနေပါတယ်။
အဲဒီရုပ်တု ၂ ခုမှာ ဘယ်သူက ဆုိုခရေတီလဲ ဆုိုပြိးပြတုိုက်လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းကိုမေးကြည့်တော့ ညာလက်နဲ့ မေးစေ့ ကိုထောက်ပြပါတယ်။ လက်ယာဖက်ကတယောက်လားဆုိုပြီး သေချာအောင်မေးတော့ မဟုတ်ဘူး။ မုတ်ဆိတ်ကို ကုိုင်ပြီးစဉ်းစားနေသူတယောက်တဲ့။ အင်း…တချို့နေရာတွေမှာ Body Language ကုိုလဲ ဖတ်နုိုင်အောင်လေ့ကျင့်ထားဦးမှ။
ခရစ်မပေါ်မီ 399 BC မှာကတည်းက ဆုိုခရေတီကွယ်လွန်သွားခဲ့တယ်ဆုိုပေမဲ့ သူရဲ့ခေတ်မီတဲ့စဉ်းစား တွေးခေါ်ပုံတွေ၊ ကျင့်ဝတ်ဆုိုင်ရာစဉ်းစားပုံတွက Western philosophy ပေါ်လွှမ်းမုိုးနေဆဲပါ။ အထူးသဖြင့် သူတပည့်တဦးဖြစ်သူ ပလေတုိုရဲ့ဟောပြောမှုတွေကြောင့် မှတ်တမ်းတွေကျန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဆုိုခရေတီနဲ့ ပလေတုိုတုို့ရဲ့ ရုပ်တုရှေ့မှာ လွတ်လပ်စွာဓတ်ပုံရုိုက်ခွင့်ရပေမဲ့ ကျောင်းဝင်းထဲကုိုတော့ ၀င်ပေါက်နားလောက်ပဲလေ့လာခွင့်ရပြီး အထဲမှာ ပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်နေလုို့ ပေးမ၀င်ပါဘူး။
ပါသီနွန်၊ ဆုိုခရေတီးနဲ့ ပင်လယ်ပြာဆီရောက်ပြီးဖြစ်တာကြောင့် အေသင်မှာအထူးအထွေကိစ္စ မကျန်တော့ ပါ။ မနက်ဖြန်မနက်အိမ်မပြန်မီ မြို့ထဲတချက်လှည့်ကြည့်ဦးမှဆုိုပြီး ပါလီမန်ဖက် လမ်းပြန်လျောက်ခဲ့ပါတယ်။ ၂ ရက်တာလုံးလုံး တနေ့ကုန် Tourist ဘတ်စ်ပဲစီးနေတာဆုိုတော့ တခါမှမြို့ထဲ လမ်းမလျောက်ဖြစ်သေး။ အေသင်ပါလီမန်ရှေ့ ကလမ်းဟာလည်း တခြားဥရောပမြို့တော်တွေရှိ ပါလီမန်ရှေ့ကလမ်းလုိုပဲ အဓိပတိ လမ်း၊ အထူးသဖြင့် အော်စလုို ပါလီမန်ရှေ့က Karl Johans လမ်းလုို စည်ကားနေတာတွေ့ရပါတယ်။
အရင်နေ့တွေက ရှာမတွေ့တဲ့ အေးရှားဆုိုင်တွေ၊ တခြားဆုိုင်တွေ အစုံအလင် ဒီလမ်းပေါ်မှာတွေ့ရပါတယ်။ ထမင်းမရလုို့ ပီဇာတွေ၊ ဟမ်ဘာဂါတွေနဲ့တင်းတိမ်နေရတဲ့ဗုိုက်ကိုလည်း အခုမှပဲ တရုတ်ဆုိုင်က အစာတွေ နဲ့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ထုိုင်းဆုိုင်တော့ မတွေ့မိပါဘူး။ ဂရိဟာ တူရကီနားကပ်နေတယ်။ တနည်းအားဖြင့် အာရှတုိုက်နဲ့ အနီးဆုံးဥရောပနုိုင်ငံဖြစ်တယ်ဆုိုပေမဲ့ တောင်အာရှနဲ့ အာဖရိကအစားစာ တွေ၊ ယဉ်ကျေးမှုတွေ၊ လူတွေပဲများနေပြီး အရှေအာရှကလူတွေက အနောက်ဥရောပမှာပုိုများနေတာ ထူးခြားနေသလိုပါပဲ။
တရုတ်ဆုိုင်မှာ ထမင်းစားပြီးပါလီမန်ရှေ့ပြန်လာတော့ ဆန္ဒပြပွဲတခုနဲ့တုိုးနေပါတယ်။ အေသင်ဆုိုတာ ဆုိုခရေးတီးတုို့ ခေတ်ကတည်းက ဒီမုိုကရေစီသဘောတရားထွန်းကားနေတဲ့အရပ်ဆုိုတော့ ဆန္ဒပြတာ ဘာမှမထူးဆန်း။ ဘယ်သူမှလည်း ၀ုိုင်းအုံပြီး လာကြည့်မနေပါ။ ရဲကားတွေလဲမတွေ့မိပါ။ ဒီမုိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေးဆီ ချီတက်နေတဲ့ မြန်မာ့ပါလီမန်နဲ့ ဒီမုိုကရေစီစတင်မွေးဖွားရာ ဂရိပါလီမန် ဘာတွေကွာနေသလဲ။
၁၉၄၈ လွတ်လပ်ရေးရကာစက မြန်မာ့ပါ့လီမန်ဟာ ရန်ကုန်မြို့လယ်က လူနေရပ်ကွက်ထဲမှာရှိပေမဲ့ မဆလ ခေတ်မှာတော့ ပြည်သူ့ရင်ပြင်ဖက်ရှိ ကွင်းပြင်ထဲရောက်သွားပါတယ်။ အဲ- နအဖ ခေတ်ရောက်တော့ ရန်ကုန်နဲ့ မုိုင် ၃၀၀ ကျော်ဝေးတဲ့ နေပြည်တော်မြို့သစ်ဆီရောက်သွားပြန်ပါတယ်။ အဲဒီမြို့သစ်မှာမှတခါ လူနေ့ရပ်ကွက်နဲ့ ပါလီမန်က ၁၀ ကီလိုကျော်ထပ်ဝေးနေပြန်ပါတယ်။
ပြီးတော့ အစိုးရရုံးထုိုင်တဲ့ နေပြည်တော်ပါလီမန်ရှေ့မှာဆန္ဒပြတာ မသင့်တော်ဘူးဆုိုပြီး ဆန္ဒပြခွင့်ပိတ်ပင် ထားပြန်ပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၂၀၀၀ ကျော်က ဒီမုိုကရေစီသဘောတရားတွေကို ငြင်းခုန်ခဲ့တဲ့၊ ကျောင်းသုံး သမုိုင်းစာအုပ်ထဲမှာ အခုထိစုိုးမုိုးဆဲဖြစ်တဲ့ ဆုိုခရေတီးနဲ့ ပလေတုိုတုို့သာ မြန်မာ့ပါလီမန်နဲ့ မြန်မာ့ ဒီမုိုကရေစီအကြောင်းသိရင် ဘယ်လုိုများမှတ်ချက် ပေးလေမလဲလုို့စဉ်းစားရင်း ရှေးဟောင်းအေသင်မြို့ ဆီကနေ ပြန်လည်ထွက်ခွာလာခဲ့ပါ တယ်။ ။
မနကျအိပျရာနိုးခြိနျ ရာသီဥတုအနအေထားကို Check လိုကျတော့ နသောပွီး အပူခြိနျက ၁၈ ဒီဂရီတောငျ ရှိနပေါတယျ။ ရခေဲပွငျကနေ ထှကျပွေးလာသူတဦးအဖို့ Wow! ဆိုပွီး အျောခငျြစရာကွိး။ ဥရောပနိုငျငံခငျြး တူရဲ့နဲ့ ဘာကွောငျ့ ဒီလောကျကှာသှားတာလဲ။ အငျး- မွနျမာပွညျမှာတောငျ ပူတာအိုနဲ့ ကော့သောငျက ဒီလိုကှာနတောပဲလေ။ မွောကျဝငျးရိုးစှနျးနဲ့နီးတဲ့ အျောစလိုနဲ့ မွထေဲပငျလယျကမျခွဘေေးက အသေငျဟာ ဒီလောကျတော့ကှာမှာပေါ့။ လှနျခဲ့တဲ့နှဈ ဆောငျးတှငျးကာလတှတေုနျးကရောကျခဲ့ဖူးတဲ့ စပိနျနဲ့ ပျေါတူဂီ ထကျတောငျ ဂရိရာသီဥတုက ပိုနှေးနပေါသေးတယျ။
ဘယျနရောတှသှေားလညျရငျကောငျးမလဲဆိုပွီး ဟိုတယျကောငျတာမှာအကွံတောငျးတော့ Tourist Bus လို့ချေါတဲ့ သင်ျကွနျကားလို အမိုးဖှငျ့ ၂ ထပျကားကိုစီးပွီးလြောကျလညျတာ အကောငျးဆုံးလို့ဆိုပါတယျ။ သူငယျခငျြး တယောကျကတော့ ပွောဖူးပါတယျ။ တိုးရဈကားစီးပွီးလြောကျလညျသူတှဟော Plan မရှိသူ၊ ဘယျနရောကိုသှားမယျဆိုပွီး ကွိုတငျအစီစဉျမဆှဲထားနိုငျသူတှတေဲ့။ သူဝဖေနျရငျလညျး ခံရမှာပါပဲ။ အသေငျရောကျရငျ ဘာလုပျမယျဆိုပွီး အသေးစိပျအစီစဉျဆှဲထားတာ မရှိပါ။
နျောဝေးမှာ အေးလှနျးလို့ ဆောငျးကိုရှောငျခငျြတာရယျ၊ ပွီးတော့ သမ်မတအိုဘားမား ရာထူးကမဆငျးခငျ ၂၀၁၆ နိုဝငျဘာမှာ ဥရောပနောကျဆုံးခရီးအဖွဈ အသေငျကိုလာလညျတာ။ BC ၅ ရာစုကတညျးကရှိခဲ့တဲ့ ပါသီနှနျ (Parthenon) ဘုရားကြောငျးဆီသှားပွီး ဒီမိုကရစေီသဘောတရားအကွောငျးပွောသှားတာကို အမှတျရနပေါတယျ။ တခါ အထကျတနျးကြောငျးသားဘဝတုနျးက သမိုငျးထဲမှာသငျဖူးတဲ့ ယုံကွညျခကျြ အတှကျ အဆိပျသောကျသသှေားသူ ဆိုခရတေီးကို အမှတျရနပေါတယျ။ ဒီတော့ အသေငျရောကျရငျ အဲဒီနရော ၂ ခုဆီတော့ ရောကျအောငျသှားမယျ၊ ရာသီဥတုက သိပျနှေးမယျဆိုရငျတော့ ကမျးခွသှေားပွီး ရကေူးမယျပေါ့။ ဒီထကျ ပိုတဲ့အစီစဉျမရှိပါဘူး။
အဲဒါဆိုရငျ တိုးရဈကားစီးပွီးလညျတာ အကောငျးဆုံးပဲတဲ့။ ကားခကလညျးဈေးပေါသလားမမေးနဲ့။ ၁၆ ယူရိုဖိုး ဝယျထားရငျ ၄၈ နာရီစာ စီးလို့ရတယျတဲ့။ အရငျ စပိနျ၊ ပျေါတူဂီ၊ နယျသာလနျ၊ ဘလဂြီယံမှာ ၂၂ ယူရိုပေးရတာတောငျ ၂၄ နာရီပဲစီးခှငျ့ရှိပါတယျ။ ၁၆ ယူရိုဆိုတာ ကားပျေါမှာ ဝယျတဲ့ဈေး။ ဟိုတယျမှာ ဝယျရငျ ၁၃ ယူရိုနဲ့ ပရိုမိုးရှငျးပေးပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ကိုယျတညျးတဲ့ဟိုတယျက ဈေးနဲနဲပေါတဲ့ နရောဆိုတော့ တိုးရဈကားမှတျတိုငျ မရှိပါ။ ၁၀ မီနဈလောကျ လမျးလြောကျရတဲ့ အမြိုးသားပွတိုကျဆီ အရငျသှားပွီး အဲဒီမှတျတိုငျမှာ ကားစီးပါလို့ သူကအကွံပေးပါတယျ။
သာယာလိုကျတဲ့ရာသီဥတု။ တဆောငျးလုံးသိမျးထားရတဲ့ နကောမကျြမှနျလညျး အသေငျရောကျမှပဲ တပျခှငျ့ရပါတော့တယျ။ ဟိုတယျရှမှေ့ာ ပထမဆုံးတှမေိ့တဲ့အပငျက အျောစလိုမှာဘယျလိုမှမွငျခှငျ့မရနိုငျတဲ့ ဆီအုနျးပငျတှေ၊ တောထနျးပငျတှေ။ လမျးကွားတခုကိုကြျောတော့ လိမျမျောသီးတှအေပွညျ့နဲ့လှပနတေဲ့ လမျးဘေးသဈပငျတှေ။ နောကျထပျတှတေဲ့အဆောကျဦတခုရှမှေ့ာတော့ ဆီအုနျးအပွငျ ယူကလဈပငျကွီး တှကေိုပါတှရေ့ပါတယျ။ ရခေဲပွငျ အရပျ ထငျးရူးတောထဲက ထှကျလာသူတဦးအဖို့ အထူးအဆနျးမွငျ ကှငျးတှပေါပဲ။
နောကျထပျသတိထားမိတဲ့ ပတျဝနျးကငျြအနအေထားက လမျးစညျးကမျးနဲ့ လူစညျးကမျးက အနောကျ ဥရောပလိုမဟုတျ။ ပလကျဖောငျးပျေါ ကိုယျတခမျြးတငျပွီး ရပျထားတဲ့ကားတှေ မနဲဘူး။ လမျးအကှ့တှေ၊ လူကူးလမျးတှပေျေါ ရပျထားတဲ့ကားတှကေိုလညျး တှရေ့ပါတယျ။ ပွီးတော့ ဆိုငျကယျတှကေ လညျးပေါ သလားမမေးနဲ့။ ခငျြးမိုငျတို့၊ မန်တလေးတို့နဲ့တူတယျပွောရမယျထငျပါတယျ။ ဆိုငျကယျဦးထုတျမဆောငျး သူလဲ အမြားကွီးပါပဲ စကျဘီးသမားတခြို့ကို တှရေ့ပမေဲ့ ဒီမွို့မှာ စကျဘီးလမျးမရှိပါဘူး။ (အနောကျဥရောပ နိုငျငံအားလုံးနီးပါးမှာ စကျဘီးလမျးတှေ အသခြောလုပျပေးထားတာတှရေ့ပါတယျ)။
ဟိုငေးဒီငေးနဲ့ ၁၀ မီနဈခနျ့အကွာမှာတော့ အမြိုးသားပွတိုကျရှရေ့ောကျလာပါတယျ။ ပွတိုကျရှမှေ့ာတှရေ့ တဲ့ ဆီအုနျးပငျ၊ ပပေငျ၊ လိမျမျောပငျတှနေဲ့ ငှကျကလေးတှကေို ဓတျပုံရိုကျဖို့၊ တိမျကငျးပွီး တောကျပနတေဲ့ နရေောငျခညျြအောကျမှာ အနှေးထညျခြှတျပွီး ထိုငျဖို့အရေးသာ အားသနျနတေဲ့အတှကျ ပွတိုကျထဲ မဝငျဖွဈလိုကျပါဘူး။
(Parthenon) ပါသီနှနျ ကြောငျးတျော ဆီသို့
လာပါပွီ ဟောဒီမှာ Tourist ကားတှေ။ မီနဈ ၃၀ တစီးရှိပွီး အနီ၊ အဝါ၊ အပွာ ၃ လိုငျးရှိပါတယျ။ တခွား ဥရောပနိုငျငံတှမှော ဘယျကားဖွဈဖွဈ တကျစီးလို့ရပမေဲ့ ဒီမှာတော့ မရဘူး။ ကိုယျဝယျမိတဲ့လကျမှတျက အပွာလိုငျးတခုပဲ စီးခှငျ့ရှိသတဲ့။ အမြိုးသားပွတိုကျရှကေ့နေ မွို့လယျဆီရောကျလာပါတယျ။ တခွား ဥရောပနိုငျငံတှလေိုပဲ မွအေောကျရထားဘူတာတှေ၊ ပနျးခွံတှေ၊ ဈေးဝယျစငျတာတှရှေမှေ့ာ လူတှစေညျ ကားနပေါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ထူးခွားတာက ဒီမှာတှမေိ့တဲ့လူတှဟော အနောကျဥရောပမှာလို လူဖွူ၊ လူမဲ၊ လူဝါတှသေိပျမမြားပဲ မနကေ့ အငျစတနျဘူးလျ လယေဉျကှငျးမှာတှမေိ့သလို ဥရောပနဲ့ အာဖရိကားကွားက အရောငျတှအေတျောမြားနတော သတိထားမိပါတယျ။
လမျးဘေး ကျောဖီဆိုငျတှမှောထိုငျနတေဲ့ ပငျစားအရှယျအတျောမြားမြားကိုတှရေ့သလို အထုပျအပိုး ကိုယျစီနဲ့ ပနျးခွံ ထဲထိုငျနတေဲ့ လူငယျ၊ လူရှယျအတျောမြားမြားကိုလညျးတှရေ့ပါတယျ။ ကွညျ့ရတာ ဆိုငျမှာထိုငျနသေူတှကေ ဒသေခံဂရိတှဖွေဈပုံရပွီး ပနျးခွံထဲက အထုပျအပိုးနဲ့လူငယျတှကေတော့ အာဖရိကဖကျကနေ လှစေီးပွေးဝငျလာသူတှေ ဖွဈပုံရပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ သခြောအောငျ မေးမွနျးခှငျ့ မရခဲ့ပါဘူး။ Tourist ကားပျေါရှိ စပီကာကလညျး အဲဒီလူတှေ အကွောငျးရှငျးပွတာမဟုတျ။ လမျး တလြောကျတှရေ့တဲ့ အထငျကရ ရှေးဟောငျးအဆောကျဦတှအေကွောငျးပဲ ရှငျးပွနတောပါ။
အသေငျဟာ ရှေးဟောငျးမွို့တျောဆိုတဲ့အတိုငျး အိမျအိုဟောငျး အတျောမြားမြားကို မွို့ထဲမှာတှရေ့ပါတယျ။ ၄-၅ မှတျတိုငျစီးပွီးတဲ့အခါမှာတော့ တောငျကုနျးပျေါက ပါသီနှနျကြောငျးတျောကိုလှမျးမွငျရပါတယျ။ တကယျက အဲဒီကြောငျးတောငျဟာ မွို့လယျတောငျကုနျးပျေါမှာရှိနလေို့ တမွို့လုံးကနေ လှမျးမွငျနိုငျတဲ့ သဘောပါ။ ပါလီမနျရငျပွငျ ဆီမရောကျခငျ တမှတျတိုငျအလိုမှာတော့ သား-ငါးဈေးတနျးကွီး တခုကိုတှရေ့ပါတယျ။ ဥရောပနဲ့မတူပဲ အာရှဒသေဖကျက ဈေးတှနေဲ့ ပိုတူနသေလိုပါပဲ။
အသေငျပါလီမနျကိုအခုမှ လူကိုယျတိုငျမွငျဖူးပမေဲ့ လှနျခဲ့တဲ့နှဈပိုငျး ဂရိရဲ့စီးပှားရေးအကပျြအတညျး ကာလက ဒီပါလီမနျရှမှေ့ာ ဆန်ဒပွနကွေတာကို TV မှာအကွိမျအတျောမြားမြားမွငျဖူးပွီးသားပါ။ ပါလီမနျဘေးက ပနျးခွံကွီးကလညျးနဲတာမဟုတျ။ အဲဒီပနျးခွံထဲက တောထနျးပငျတနျးဟာ အတျောလှ ပါနပေါတယျ။ ပနျးခွံအလှနျမှာ Temple of Zeus ကြောငျးတျောဟောငျးနရောကိုတှပေ့မေဲ့ မဆငျးဖွဈခဲ့ပါ။ ဒီနအေ့တှကျ ပထမ ဦးစားပေးက ပါသီနှနျကြောငျးတျောဖွဈနတေယျမဟုတျပါလား။
နောကျတမှတျတိုငျအကြျောမှာတော့ ကားက တောငျပျေါစတကျပါတယျ။ နလေ့ညျ ၁၂ နာရီခှဲဆိုတော့ ဓတျပုံရိုကျဖို့ ဘယျလိုမှမကောငျးနိုငျ။ ဒါပမေဲ့ အခြိနျရှေးနလေို့မရ။ ကားပျေါပါလာသူ အားလုံးဆငျးကွညျ့ တဲ့နရောဖွဈပွီး အသေငျမှာတှရေ့သမြှနရောတှထေဲ အစညျးကားဆုံးဖွဈပါတယျ။ ဝငျကွေးကလညျး အမြားဆုံးနရောဖွဈပွီး ယူရှနျ ၁၀ ပေးရပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ တနျပါတယျ။ BC ၅ ရာစု (ခရဈမပျေါမီ နှဈ ၅၀၀) က သမိုငျးဝငျအဆောကျဦတခုကို ကွညျ့ခှငျ့ရဖို့ဆိုတာ လှယျတာမဟုတျ။ မွနျမာနိုငျငံက ပုဂံဘုရားတှေ ထကျ နှဈ ၁၀၀၀ နီးပါး ပိုရှေးကတြဲ့နရောပေါ့။
ဝငျဝမှာ စတှတေဲ့အဆောကျဦအမညျက Odeon of Herodes Atticus တဲ့။ ကြောကျတုံးတှနေဲ့ဆောကျ ထားတဲ့ လူထောငျနဲ့ခြီကွညျ့နိုငျတဲ့ သမိုငျးထဲက ရှေးဟောငျးပှဲကွညျ့စငျကွီးဆိုပါစို့။ အဲဒီကနေ အပျေါကို ဆကျတကျတော့ ဧရာမကြောကျလုံးတိုငျကွီးတှကေိုတှရေ့ပါတယျ။ အဝေးကကွညျ့ရငျ ကှနျကရဈလောငျး ထားတဲ့ ကြောကျတိုငျကွီးလို့ထငျရပမေဲ့ အနီးကပျအသခြောကွညျ့တော့ ကှနျကရဈမဟုတျပါ။ ၃ ပစေီ လောကျ အပိုငျးလိုကျဖွတျတောကျထားတဲ့ ကြောကျတုံးကွီးတှကေို တခုစီထပျပွီးလုပျထားတဲ့ ကြောကျ တိုငျကွီးတှပေါ။
အဲဒီတိုငျတှပေျေါက မပွိုကသြေးပဲကနျြနတေဲ့ ကြောကျတုံးအမိုးအပိုငျးအစကတော့ Propylaea ဘုရား ကြောငျးရဲ့ ခေါငျးမိုးပေါ့။ အဲဒီဝငျပေါကျအလှနျမှာတော့ ဒီတောငျကုနျးရဲ့ အဓိကအဆောကျဦ ပါသီနှနျ (Parthenon) ကြောငျး တျောကွီးကိုတှရေ့ပါတယျ။ ကြောငျးဆိုတာ temple ကို အလှယျချေါလိုကျတာပါ။ တတယျက goddess Athena နတျမိမယျနရောလို့ဆိုပါတယျ။ 447 BC မှာကတညျးက ဒီကြောငျးကို စဆောကျတာဆိုတော့ လူ့သမိုငျးမှာ ကိုးကှယျယုံကွညျမှုစတငျပျေါကာစ (ဘုရားတှမေပျေါခငျ) အခြိနျပဲရှိ ပါသေးတယျ။ ဒီကြောငျးမှာနတေဲ့ နတျဘုရားက သူတို့ကို ကူညီစောငျမတယျလို့ အသေငျမွို့သားတှကေ ယုံကွညျကွတယျလို့ဆိုပါတယျ။
ဒါတှကေ လှနျခဲ့တဲ့ နှဈပေါငျး ၂၅၀၀ ကြျောက ရာဇဝငျပါ။ အခုတော့ ဒီသမိုငျးဝငျအဆောကျဦကို မူလ လကျရာ အတိုငျးပွနျလညျထိမျးသိမျးထားနိုငျအောငျ EU အကူအညီနဲ့ပွုပွငျနတေယျလို့ စာတနျးရေးထား တာတှရေ့ပါတယျ။ ပွငျဆငျမှုလုပျနတေဲ့ ယန်တယားတှလေညျးလုပျငနျးခှငျထဲရှိနပေါတယျ။ ရှေးဟောငျး ကြောကျတိုငျတှေ ထိုးထိုးထောငျထောငျဖွဈနတေဲ့ အဲဒီအဆောကျဦဘေးမှာတော့ နတျသမီးရုပျ ၅ ခု ကထမျးထားတဲ့ အဆောကျဦ၊ ဂရိနိုငျငံတျော အလံတလူလူလှငျ့နတေဲ့တောငျကုနျးနဲ့ ဟိုခတျလှမျးလှမျးက Mount Lycabettus ကို မွငျနရေပါတယျ။
သမ်မတ အိုဘားမားလာတုနျးက တကူးတကာ့အခြိနျပေး လလေ့ာခဲ့တဲ့နရောပေါ့။ ရှေးဟောငျးဂရိယဉျ ကြေးမှု၊ ဒီမိုက ရစေီအတှေးအချေါနဲ့ အနောကျတိုငျးလူအဖှဲ့အစညျး western civilization အတှကျ သိပျအရေးကွီးတဲ့နရောတခု ဖွဈတယျလို့ဆိုပါတယျ။ ဒီတောငျကုနျးဟာ အသေငျမွို့လယျခေါငျတညျ့တညျ့ မှာရှိနတောကွောငျ့ တမွို့လုံးကိုလှမျး ကွညျ့ခှငျ့ရတဲ့မွငျကှငျးကလဲ လှပနပေါတယျ။ အသေငျမှာ လူဦးရေ ၇ သိနျးနီးပါးရှိပွီး ဂရိတနိုငျငံလုံးလူဦးရကေ ၁၂ သနျးနီးပါးရှိပါတယျ။
သမိုငျးဝငျအဆောကျဦတှကေိုငေးရငျး၊ ဓတျပုံရိုကျရငျးနဲ့ အခြိနျတှေ ဘယျလိုကုနျသှားမှနျးမသိလိုကျ။ ဘတျဈကားဂိတျပွနျရောကျတော့ နလေ့ညျ ၂ နာရီကြျောနပွေီ။ အပွာရောငျကားက ကမျးနားဖကျသှား တာတစီး၊ မွို့ထဲပွနျဝငျ တာတစီးရှိတယျလို့ ကားဂိတျမှာစောငျ့နတေဲ့ ဧညျ့လမျးညှနျကောငျမလေး ကပွောပါတယျ။ ကောငျမလေးဆိုလို့ ဥရောပသူအတျောမြားမြား ဆေးလိပျသောကျကွပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ထူးခွားတာက အနောကျဥရောပသူတှကေ စီးကရကျသောကျပွီး အသေငျသူတှကေ ပှတျခြှနျး (လကျလုပျ ဆေးလိပျ) သောကျနခွေငျးပါ။ စားသောကျဆိုငျတှမှောလညျး ဆေးလိပျသောကျသူတှရှေိနဆေဲမို့ နျောဝမှောလို ဆေးလိပျဥပဒေ သိပျတငျးကပျြပုံမရသေးပါ။
နသောတုနျး ကမျးနားဖကျအရငျသှားမယျလို့ဆုံးဖွတျလိုကျပါတယျ။ လှလိုကျတဲ့ကမျးခွတှေေ၊ အပူခြိနျက ၂၀ တောငျကြျောမလားမသိပါ။ ကမျးခွမှော ရကေူးသူ၊ နစောလှူံသူ၊ လမျးလြောကျနသေူ၊ ဘာဘီကြုးကငျ နသေူတှအေမြားကွီး။ ရမေကူးရငျတောငျ သဲသောငျပျေါ လမျးတော့ဆငျးလြောကျကွညျ့ဦးမှဆိုပွီး ကားပျေါက ဆငျးလိုကျပါတယျ။ ပလကျဖောငျးပျေါရောကျပွီးမှ နောကျဘတျဈကားက ဘယျခြိနျလဲဆိုပွီးမေး မိပါတယျ။ လမျးဘေးဆိုငျမှာ ဆေးလိပျဝယျပွီးပွနျလာတဲ့ ကားဆရာက ဒီကားဟာ နောကျဆုံးပဲတဲ့။ အမျ- အဲဒါနဲ့ ကမျးခွပေျေါ လမျးလြောကျခှငျ့မရပဲ ကားပျေါပွနျတကျခဲ့ရတယျဆိုပါတော့။
ကမျးခွတေလြောကျ ကားမောငျးခြိနျ တနာရီနီးပါးကွာတယျဆိုတော့ အသှားအပွနျ ၂ နာရီတောငျ။ ဟိုတယျပွနျရောကျတော့ ညနေ ၅ နာရီလောကျရှိနပွေီ။ အေးရှားဆိုငျကိုရှာမတှသေ့ေးတော့ အီတလီ ပီဇာနဲ့ပဲ ညစာကို ဗိုကျဖွညျ့လိုကျရပါတယျ။ နောကျတနမေ့နကျမှာတော့ မနကေ့မရောကျဖွဈသေးတဲ့ ဆိုခရေးတီး ပွတိုကျဆီရောကျ အောငျသှားဖို့ဆုံးဖွတျလိုကျပါတယျ။ ထုံးစံအတိုငျး Tourist ကားကို မနကေ့အတိုငျးပွနျစီး။ မွို့တပတျပတျပွီးမှ ဆိုခရတေီးနဲ့ပလတေိုတို့ ရုပျတုတှရှေိတဲ့ အမြိုးသားစာကွညျ့ တိုကျဆီရောကျပါတယျ။
ပါသီနှနျကြောငျးတျော၊ Zeus ကြောငျးတျောနဲ့ တခွားပွတိုကျတှမှော လူမြားသလောကျ ဆိုခရေးတီးတို့ ဆီမှာ လူနဲပါတယျ။ ခရဈမပျေါခငျကတညျးက ဒီမိုကရစေီသဘောတရားအခွခေံတှကေိုငွငျးခုနျခဲ့ဖူးတဲ့ ကြောငျးတျောဟောငျးကွီးရဲ့ဝငျပေါကျမှာ ကြောကျရုပျ ၂ ခုကိုတှရေ့ပါတယျ။ ဂရိဘာသာနဲ့ရေးထား တာဆိုတော့ ဘာတှမှေနျးမသိ။ ဒါလညျး ဂရိရဲ့ထူးခွားခကျြပါပဲ။ အနောကျဥရောပနိုငျငံအတျောမြားမြားမှာ အင်ျဂလိပျဘာသာနဲ့ဆိုငျးဘုတျတှရေေးထားသလို လူတိုငျးနီးပါး အင်ျဂလိပျစကားပွောတတျကွပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ဂရိမှာ အင်ျဂလိပျစကားပွောနိုငျသူနဲနဆေဲဖွဈပွီး ဆိုငျးဘုတျတှကေလညျး ဂရိဘာသာတခု တညျးနဲ့ရေးထားတာက မြားနပေါတယျ။
အဲဒီရုပျတု ၂ ခုမှာ ဘယျသူက ဆိုခရတေီလဲ ဆိုပွိးပွတိုကျလုံခွုံရေးဝနျထမျးကိုမေးကွညျ့တော့ ညာလကျနဲ့မေးစေ့ ကိုထောကျပွပါတယျ။ လကျယာဖကျကတယောကျလားဆိုပွီး သခြောအောငျမေးတော့ မဟုတျဘူး။ မုတျဆိတျကို ကိုငျပွီးစဉျးစားနသေူတယောကျတဲ့။ အငျး…တခြို့နရောတှမှော Body Language ကိုလဲ ဖတျနိုငျအောငျလကေ့ငျြ့ထားဦးမှ။
ခရဈမပျေါမီ 399 BC မှာကတညျးက ဆိုခရတေီကှယျလှနျသှားခဲ့တယျဆိုပမေဲ့ သူရဲ့ခတျေမီတဲ့စဉျးစား တှေးချေါပုံတှေ၊ ကငျြ့ဝတျဆိုငျရာစဉျးစားပုံတှက Western philosophy ပျေါလှမျးမိုးနဆေဲပါ။ အထူးသဖွငျ့ သူတပညျ့တဦးဖွဈသူ ပလတေိုရဲ့ဟောပွောမှုတှကွေောငျ့ မှတျတမျးတှကေနျြခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ ဆိုခရတေီနဲ့ ပလတေိုတို့ရဲ့ ရုပျတုရှမှေ့ာ လှတျလပျစှာဓတျပုံရိုကျခှငျ့ရပမေဲ့ ကြောငျးဝငျးထဲကိုတော့ ဝငျပေါကျနားလောကျပဲလလေ့ာခှငျ့ရပွီး အထဲမှာ ပွငျဆငျမှုတှလေုပျနလေို့ ပေးမဝငျပါဘူး။
ပါသီနှနျ၊ ဆိုခရတေီးနဲ့ ပငျလယျပွာဆီရောကျပွီးဖွဈတာကွောငျ့ အသေငျမှာအထူးအထှကေိစ်စ မကနျြတော့ ပါ။ မနကျဖွနျမနကျအိမျမပွနျမီ မွို့ထဲတခကျြလှညျ့ကွညျ့ဦးမှဆိုပွီး ပါလီမနျဖကျ လမျးပွနျလြောကျခဲ့ပါတယျ။ ၂ ရကျတာလုံးလုံး တနကေု့နျ Tourist ဘတျဈပဲစီးနတောဆိုတော့ တခါမှမွို့ထဲ လမျးမလြောကျဖွဈသေး။ အသေငျပါလီမနျရှေ့ ကလမျးဟာလညျး တခွားဥရောပမွို့တျောတှရှေိ ပါလီမနျရှကေ့လမျးလိုပဲ အဓိပတိ လမျး၊ အထူးသဖွငျ့ အျောစလို ပါလီမနျရှကေ့ Karl Johans လမျးလို စညျကားနတောတှရေ့ပါတယျ။
အရငျနတှေ့ကေ ရှာမတှတေဲ့ အေးရှားဆိုငျတှေ၊ တခွားဆိုငျတှေ အစုံအလငျ ဒီလမျးပျေါမှာတှရေ့ပါတယျ။ ထမငျးမရလို့ ပီဇာတှေ၊ ဟမျဘာဂါတှနေဲ့တငျးတိမျနရေတဲ့ဗိုကျကိုလညျး အခုမှပဲ တရုတျဆိုငျက အစာတှေ နဲ့မိတျဆကျပေးခဲ့ရပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ထိုငျးဆိုငျတော့ မတှမေိ့ပါဘူး။ ဂရိဟာ တူရကီနားကပျနတေယျ။ တနညျးအားဖွငျ့ အာရှတိုကျနဲ့ အနီးဆုံးဥရောပနိုငျငံဖွဈတယျဆိုပမေဲ့ တောငျအာရှနဲ့ အာဖရိကအစားစာ တှေ၊ ယဉျကြေးမှုတှေ၊ လူတှပေဲမြားနပွေီး အရှအောရှကလူတှကေ အနောကျဥရောပမှာပိုမြားနတော ထူးခွားနသေလိုပါပဲ။
တရုတျဆိုငျမှာ ထမငျးစားပွီးပါလီမနျရှပွေ့နျလာတော့ ဆန်ဒပွပှဲတခုနဲ့တိုးနပေါတယျ။ အသေငျဆိုတာ ဆိုခရေးတီးတို့ ခတျေကတညျးက ဒီမိုကရစေီသဘောတရားထှနျးကားနတေဲ့အရပျဆိုတော့ ဆန်ဒပွတာ ဘာမှမထူးဆနျး။ ဘယျသူမှလညျး ဝိုငျးအုံပွီး လာကွညျ့မနပေါ။ ရဲကားတှလေဲမတှမေိ့ပါ။ ဒီမိုကရစေီ အသှငျကူးပွောငျးရေးဆီ ခြီတကျနတေဲ့ မွနျမာ့ပါလီမနျနဲ့ ဒီမိုကရစေီစတငျမှေးဖှားရာ ဂရိပါလီမနျ ဘာတှကှောနသေလဲ။
၁၉၄၈ လှတျလပျရေးရကာစက မွနျမာ့ပါ့လီမနျဟာ ရနျကုနျမွို့လယျက လူနရေပျကှကျထဲမှာရှိပမေဲ့ မဆလ ခတျေမှာတော့ ပွညျသူ့ရငျပွငျဖကျရှိ ကှငျးပွငျထဲရောကျသှားပါတယျ။ အဲ- နအဖ ခတျေရောကျတော့ ရနျကုနျနဲ့ မိုငျ ၃၀၀ ကြျောဝေးတဲ့ နပွေညျတျောမွို့သဈဆီရောကျသှားပွနျပါတယျ။ အဲဒီမွို့သဈမှာမှတခါ လူနရေ့ပျကှကျနဲ့ ပါလီမနျက ၁၀ ကီလိုကြျောထပျဝေးနပွေနျပါတယျ။
ပွီးတော့ အစိုးရရုံးထိုငျတဲ့ နပွေညျတျောပါလီမနျရှမှေ့ာဆန်ဒပွတာ မသငျ့တျောဘူးဆိုပွီး ဆန်ဒပွခှငျ့ပိတျပငျ ထားပွနျပါတယျ။ လှနျခဲ့တဲ့ နှဈ ၂၀၀၀ ကြျောက ဒီမိုကရစေီသဘောတရားတှကေို ငွငျးခုနျခဲ့တဲ့၊ ကြောငျးသုံး သမိုငျးစာအုပျထဲမှာ အခုထိစိုးမိုးဆဲဖွဈတဲ့ ဆိုခရတေီးနဲ့ ပလတေိုတို့သာ မွနျမာ့ပါလီမနျနဲ့ မွနျမာ့ ဒီမိုကရစေီအကွောငျးသိရငျ ဘယျလိုမြားမှတျခကျြ ပေးလမေလဲလို့စဉျးစားရငျး ရှေးဟောငျးအသေငျမွို့ ဆီကနေ ပွနျလညျထှကျခှာလာခဲ့ပါ တယျ။